बुधवार, श्रावण २०, २०७८ युनिकोड
बिहिवार, असार २४, २०७८ जनता नेपाल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले कोरोनाविरुद्धको खोप आमनागरिकलाई उपलब्ध गराउने ‘पहिलो एजेण्डा’ बनाएका छन् । अस्पतालको पूर्वाधार विकास, निजी तथा सरकारी अस्पतालका विकृति अन्त्य उनको प्रतिबद्धता हो ।
१. संक्रमण रोकथाममा तत्काल योजना के छ ?
पहिलो जोड खोप नै हो । यसअलावा कोरोना रोकथामका लागि श्यया व्यवस्थापनदेखि आइसोलेसन सेन्टर, परीक्षणलगायत भइरहेका छन् । १ सय ५६ सरकारी अस्पतालबाट कोरोना उपचार जारी छ, ती अस्पतालमा पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गरिन्छ । डेडिकेटेड अस्पतालबाट कोरोना उपचार हुँदै आएको छ । वीर कोरोनाको सेन्टर अस्पतालमा रूपान्तरण गरेका छौं । गम्भीर विरामीका लागि वीरमा व्यवस्था मिलाएका छौं । आमनागरिक स्वयं सुरक्षित रहनुप¥यो । जनतालाई सुरक्षित र जीवनरक्षा गर्न निरन्तर लागिरहेका छौं । करीब १४ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउन बाँकी छ । खरीद वा अनुदान प्रक्रिया, जेबाट हुन्छ, छिट्टै भ्याक्सिन प्राप्त हुनेछ भने आशामा छौं ।
२. आमनागरिकसम्म खोप कहिले पुग्छ ?
केही राष्ट्रका सीमित कम्पनीले खोप उत्पादन गरिरहेका छन् । केही खोप उत्पादक राष्ट्रस“ग छलफल जारी छ । नेपालजस्तो देशलाई छिटोभन्दा छिटो खोप दिन अपिल गरेका छौं । हामी खोप खरीद गर्न पनि तयार छौं भनेका छौं । खरीदका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कतिपय राष्ट्र र खोप उत्पादक कम्पनीका सर्त छन् । तीबारे गहन ढंगले छलफल गरिरहेका छौं । जनजीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय कटिबद्ध छ । विभिन्न कम्पनी र सरकारमार्फत खोप ल्याउन गहन ढंगले छलफल भएको छ । केही दिनभित्रै खोपसम्बन्धी सुखद समाचार आउँछन् भन्ने लाग्छ ।
३. खोपको प्राथमिकता केमा हुन्छ ?
पहिलो प्राथमिकता अग्रपंक्तीमा खटिने ‘फ्रन्टलाइनर’ नै हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि प्राथमिकता सन्दर्भमा स्पष्ट भनेको छ । फ्रन्टलाइनर, ज्येष्ठ नागरिक हुँदै क्रमिक रूपमा आमनागरिकलाई लगाउने भन्ने हो । ‘लोकल’ प्राथमिकता पनि बनाउन सक्छौं । केही फ्रन्टलाइनर छुटेका छन् । यातायात मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीलगायत छुटेका छन् । उनीहरूको फाइल प्राप्त भएको छ । एकैचोटी धेरै ल्याउन सक्ने स्थिति बन्यो भने सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिने देखिन्छ । सरकारको लक्ष्य आमनागरिकलाई बचाउने भन्ने हो । उपलब्ध उमेर समूहको आधारमा सबैलाई लगाउने मापदण्ड बनाएका छौं । यद्यपि, खोप प्राप्त हुनुअघिसम्म सुरक्षित भएर बसिदिन हाम्रो आग्रह छ ।
४. निजी अस्पतालले कोरोनाका नाममा मनलाग्दी शुल्क लिएका छन् नि ?
सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार हुन्छ । निजी अस्पतालले अत्यन्तै धेरै शुल्क लिएको गुनासा आएका छन् । यद्यपि, हामीले कार्यादेश जारी गरेर निर्देशन गरेका छौं । अनुगमन गर्छौं । वीर अस्पतालमा केही दिनपश्चात् जो विरामी आउँछन्, त्यहाँबाट शøया छैन भनेर फर्किन पर्दैन । यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारी अस्पतालबाट भर्ना नै नपाएर फर्किने स्थिति अन्त्य हुने ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु ।
५. सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्यलाई धेरै रकम बिनियोजन गरिएको छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ त ?
आगामी १ साउनबाट बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनमा आउँछ । सतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्छौं । बजेट त बन्यो तर कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो । योपटक सबै बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी लाग्नेछु । किनभने अस्पताल बनाउने बजेट छ । त्यो त कार्यान्वयन गर्नुप¥यो नि । यसका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्छौं । कोरोनासम्बन्धी अध्यादेशले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा टेण्डर प्रक्रिया छोट्याउने व्यवस्था गरेका कारण सहज हुनेछ ।
(मन्त्री तामांगसँग प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकको लागि गरेको बार्ताको सम्पादित अंश :)
प्रकाशित मिति: बिहिवार, असार २४, २०७८, ०७:१८:३४
राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची बुधवार, श्रावण २०, २०७८
आज थप २ हजार २ सय ९९ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित जनता नेपाल
६ दिनभित्र चीनबाट थप १० लाख डोज खोप ल्याउने तयारी, निगमको जहाज बेइजिङ जाँदै जनता नेपाल
उपत्यकामा भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने केन्द्र तोकियो ( सुची सहित) जनता नेपाल
सिड्नीमा पुन: चार हप्ता लकडाउन हुने बिहिवार, श्रावण १४, २०७८
जर्मनीको लेभरकुसेन औधोगिक पार्कमामा विस्फोट: दुईको मृत्यु, ३१ घाइते बुधवार, श्रावण १३, २०७८
सीमा विवादमा झडप हुँदा ६ प्रहरीको मृत्यु, भारतका असम र मिजोरम राज्य तनावपुर्ण मंगलवार, श्रावण १२, २०७८
निषेधाज्ञाका बिच श्रम स्वीकृति लिनेको थामिनसक्नु भिड मंगलवार, असार २२, २०७८
सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावर कम्पनी नवीकरण हुने बुधवार, असार १६, २०७८
नेबिकोको ५७औं स्थापना दिवसमा बालाजु र गौरिघाटमा फ्याक्ट्री आउटलेट
नेपाल र भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनको उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा स्वागत (बिज्ञप्ति सहित)